ओ मिनी मङ्किज, मुख धोएर सडकमा ओर्ल सत्तामा भष्मासुरे ओली प्रवृत्तिको हठात् र रातारात जायजन्म भएको किमार्थ होइन । ओ सडक ! म निवेदन गर्छु- सोध, कठालाे समातेर यिनलाई सोध- ओलीय अहङ्कार, स्वेच्छाचार, दुच्छरपन, असहिष्णुता र प्रतिशोधको भावना आँखैअगाडि अंशअंश गरी बढ्दै जाँदा तिमीहरूका आँखा फुटेका थिए ? २८ पुस, २०७७ 10 min read Share
ओलीले नाकानाकामा प्रतिगमनकाे सेटिङ मिलाएका छन्, तपाईं अझै ठट्टा सम्झिरहनुभएको ? २७ पुस, २०७७ 12 min read Share
भ्रष्ट नम्बर एकको वरिपरि भाइरस प्रतिरोधी ग्यास अनेक अनुनय–विनयपछि एक हजार अमेरिकी डलर दस्तुर बुझाउने सर्तमा माथिको आदेश प्राप्त भयो । बोलीबाट बस्तीतिर नैतिक प्रदूषणकारी भाइरसहरू प्रसार हुन नपाऊन् भन्ने हेतुले भ्रष्ट नम्बर एकको गोलघरवरिपरि भाइरस प्रतिरोधी विषाक्त ग्यास छरियो २४ पुस, २०७७ 16 min read Share
बिदा स्वनाम साथी- पहराको एक सुनाखरी वास्तविक जीवनमा स्वनाम साथी आफू करिबन त्यस्तै थिए । थुप्रा साहु कम्निस्टहरूमाझका एक गरिब कम्निस्ट स्वनाम साथी ! अनिकालको एक बिउ, औँसीको एक जुनकिरी, जीवनको विकट पहराको एक सुनाखरी ! १३ पुस, २०७७ 25 min read Share
छुट्याे एउटा नक्कली पिरती दिउँला-दिउँला भन्दै ओलीले हुस्सु दाहाललाई सधैँ ‘माछोमाछो- भ्यागुताे’ गरिदिए । ओलीले दाहालको असीमित अपमान गरे, असीमित अपमान पाएर पनि दाहाल तृप्त भएनन् १० पुस, २०७७ 11 min read Share
बाँदरलाई मकैबारीको गोठालो बनाएपछिकाे नतिजा ओलीका चरणमा लम्पसार परी नित्य चाकरी र चाप्लुसीको माध्यमले निजलाई असनको साँढे बनाउने कार्यमा जसको सर्वोच्च योगदान हो, त्यसको चर्चा गर्न त बाँकी नै छ । ओलीलाई ह्याँसम्मको मत्ता साँढे बनाउने प्रचण्ड नै हुन् । ६ पुस, २०७७ 10 min read Share
यस्तो सरकारलाई म जनरक्षक सरकार भनूँ कि जनभक्षक सरकार ? अन्तअन्त लकडाउन गर्दा सरकार धेरथोर दयालु देखिएका छन् । बुटिटाट जनलाई तिनले थोरैतिनो चारोको चाँजो मिलाएका छन् । नेपालमा तातोभुत्लो केही छैन । दूर दरबारबासी सरकार ठान्दो हो, 'मेरो पेट दुनियाँको पेट हो । मैले टन्न खानु दुनियाँले टन्न खानु हो । बस्, म खुब खान्छु, टन्टै खलास !' २४ मंसिर, २०७७6min read Share
आफैँ आफूलाई मार्दै जिन्दगीभरि सडक पेटीमा शानले फसफस चुरोट उडाउँदै हिँडेका पट्ठालाई जब देख्छु, मलाई त्यो आफ्नै सक्कलबमोजिमको दुरुस्त नक्कलजस्तो लाग्छ । मूूर्ख, लहडी, आफ्नै हातले जिउँदै अंशअंश गरी आफूलाई दागबत्ती दिइरहेको, र त्यो दागबत्ती दियाइमा मिथ्या शान र आत्मविनाशक आनन्द अनुभूत गरिरहेको ! १९ मंसिर, २०७७ 16 min read Share
कोरोनातुल्य कुदृष्टिले गर्नु गर्‍यो कोरोनाअघि सेतो कपाल सम्मानको निशानी थियो । कोरोनापछि यही कपाल हेलाको निशानी बन्यो । अन्तका कुरा के गर्नु, सभ्य भनाउँदा बेलायत–अमेरिकाको ताल पनि देखियो । ७ मंसिर, २०७७6min read Share
अलिकता गडबड भा'कै हाे, हगि त हाङयुग ब्राे ‘सत्ता र सत्य’ सानो दराजको डिलबाट मलाई टुलुटुलु हेरिरहेछ । यो वास्तवमा छापिएका ३ हजार थान पुस्तक जम्मैको प्रतिनिधिमूलक हेराइ हो । यो हेराइले हाङयुगीय लवजमा मलाई नित्य गिज्याइरहेझैँ लाग्छ- ‘हगि त खगेन्ब्रो ?’ २ मंसिर, २०७७ Share
कपाल : ट्रम्पकाे, बाेरिस जाेन्सनकाे, अनि मेराे ज्ञानवान् कौवालाई निवेदन गरेँ— ‘सत्य बोल् ब्रिटिश कौवा । बोरिस सरको कपाल निजहजुरको सौन्दर्य चेतको रूप हेर्ने ऐना हो ?’ सदा बाचाल काग अहिले भने मौन रह्यो । कुरुप कपालको विकर्षणले मलाई डोनाल्ड ट्रम्पको कपाल याद दिलायाे २२ कात्तिक, २०७७ Share
अस्ट्रेलियावासी टीभी सम्पादकलाई काठमाडाैंबाट पत्र तपाईंकाे प्रकाशनमा मेरो सानो लेखको पुछारमा घिउकमिले अक्षरमा एउटा विस्मयकर प्रकाशकीय सूचना पढेँ । सूचनामा एक राउण्ड निषेधकारी संहिता छ र एक राउण्ड ध्वाँस छ। यो जङ्गी सूचना भन्छ- ‘यो सामग्री लिखित अनुमति नलिई अन्य कुनै अनलाइन वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित/प्रसारित गर्न पाइने छैन । यसो गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाइनेछ’ १७ कात्तिक, २०७७ Share